I-Power Plant isebenzisa i-Ellicott® Dredge ukukhiqiza Izinto Zokusebenzisa Okuwusizo
I-Coal Burning Power Plant isebenzisa i-Ellicott® Dredge ukukhiqiza Izinto ezine Zokusebenzisa Okuwusizo
"Ucezu lwemishini olungabizi kakhulu olake lwalethwa kule ndawo. "- UMark Shea, Umsizi Wokuphatha Ukwelashwa Kokungcola
Ngendlela engathandeki ye-hydraulic dredge, a I-Ellicott Brand Series 370 Dragon ”DRAGON® ” isiqu se-cutterhead ukumbula izinto ezi-100,000 ezahlukahlukene kusuka kumachibi amabili okuphehla amandla okuphehla amandla: umlotha osindayo, umlotha ongaphansi, udaka kanye nolamula oxutshwe nomlotha wempukane. Uhlaka lwathutha ngaphezu kwama-XNUMX ama-cubic yards ezinyangeni ezintathu nje.
IDolobha LaseSpringfield, e-Illinois liphethe futhi lisebenza iCity Water Light & Power (CWLP) Dahlmann Generating Station. Amalahle avuthayo akhiqiza imfucumfucu emithathu: impukane yomlotha, umlotha ongezansi, nomcako ovela esitshalweni sokuhlanza amanzi. Esikhathini esedlule, lezi zinto zokungcola bezigcinwa unomphela emachibini endaweni eyomile noma emanzi. Muva nje, ukusetshenziswa okuzuzisayo sekutholakele kulokhu
imikhiqizo. Umlotha ongezansi usetshenziselwa ukwenza imithombo yezindaba nokuqhuma; i-fly ash isetshenziswa njengezinto zokugcwalisa zokwakhiwa komgwaqo omkhulu; I-lime isetshenziswa emasimini epulazi lase-Illinois ukwenza inhlabathi i-acid ibuye futhi ithuthukise isivuno.
Kunenkinga eyodwa enkulu, kepha: yonke le mikhiqizo idonswa emachibini axazululwa ngamanzi, yingakho ijwayele ukuhlala ezindaweni ezinkulu echibini, okwenza kube nzima kakhulu ukululama. Phambilini iDolobha laligebha lezi zinto kusetshenziswa amageja angemuva atholakala emaphethelweni echibi, kepha le mishini ibinokufinyelela okulinganiselwe ngakho-ke ubuningi bento - kuze kufike
I-90% - yahlala emachibini angaphansi kwamanzi.
I-CWLP, ngemuva kophenyo kubuchwepheshe obuningi bokumba, ikhethe ukumba okwenziwe kusetshenziswa i-Ellicott Brand "DRAGON®" cutterhead dredge. Banqume ukudiliza kuqala ichibi labo elikhulu kunawo wonke (elingamamitha angu-3000 ubude x amamitha ayi-1000 ububanzi) ebeliqukethe umlotha ongezansi nomlotha wezimpukane. IDolobha liqashe i-Ellicott®, brand dredge futhi layisebenzisa nge
abasebenzi abaqeqeshwe onjiniyela onjiniyela endaweni ethile ngaphandle kwezindleko ezengeziwe eDolobheni.
Ngokudonswa kwengca, i-CWLP ikwazi ukufaka imayini ngaphansi kwamanzi kufinyelela kumamitha angama-2000 kude nendawo lapho isuswe khona impahla echibini ukuze ifakwe futhi yomiswe. Ngoba ipayipi le-12-inch lalikhipha amandla afinyelela ku-50% lapho kulalwa khona kule ndawo kufinyelela ku-4000 GPM, kanti iDolobha belingazi ukuthi into ezoxazululeka endaweni enesiteji noma ibuyele echibini elikhulu, isinqumo sokuqala lapho kuqala sasinzima. Kodwa-ke, ngemuva kwamasonto amabili ekwehla, iDolobha lanquma ukuthi umlotha ongaphansi nomlotha ezindizayo zihlala kahle kakhulu endaweni eyisiteji futhi kungenzeka ukuthi zimbiwa kalula yizindlu ezingemuva, ezingase zisebenze endaweni eyodwa kuphela. Lokhu kube yimpumelelo enkulu ohlelweni lokuphinda kusetshenziswe kabusha ngoba i-100% yezinto ezibonakalayo emachibini zingahle zembiwe ngodaka bese zomiswa ukuze zisetshenziswe ngokunenzuzo.
Ukusebenza kahle kwe-Dredge Kusindisa Ngaphezu kwe- $ 200,000
Ngoba ingxenye yomlotha wezimpukane yayithuthele esakhiweni esikhulu samachibi okugeleza, i-dredge nayo yasetshenziselwa ukuhlanza le ndawo ukuvumela ukulungiswa okungcono kokuqina echibini yingakho kungcola okungcolile. UMnu.Mark Shea, umphathi wephrojekthi wokumba kabusha iDolobha, akanalutho ngaphandle kokuncoma i-Ellicott® brand dredge. “Asigcini nje ngokumba okokusebenza ukuze kusetshenziswe kabusha, kepha sithola umfudlana ohlanzekile wamanzi ngezindleko eziphansi kakhulu kunokwembiwa okuvamile kusetshenziswa imigogodla nezinsimbi. Ngalesi sikhathi esifushane sokubamba, iDolobha selonge imali engaphezu kwama- $ 285,000 uma kuqhathaniswa namasu ajwayelekile, ukonga okungu-50%. ”
IDolobha lisebenzise nje i- $ 1.80 nge-cubic yadi ngayinye yezinto ezisusiwe kuqhathaniswa nesilinganiso sangaphansi senkontileka esingaphandle se- $ 3.85 egcekeni ngalinye.
Isiziba sesibili nesincane, esithola amanzi angcolile kusuka echibini elikhulu lomlotha wezimpukane / phansi, futhi liqukethe i-lime slurried-in kusuka kwinqubo yabo yokuhlanzwa kwamanzi i-SO2. IDolobha belingazi ukuthi i-Ellicott® Brand 370 dredge izosebenza kahle kangakanani kulayini oqinile, oqinile ohlanganiswe echibini. Kwakukhona nepayipi elingamamitha ayi-2000 elalithintekile, ngakho-ke idolobha lafaka i-flow meter (ukukala i-slurry gpm) negeji yamandla enuzi ukukala iphesenti lezinto eziqinile ku-slurry. Endaweni yokukhipha ngamamitha ayi-2000 kude, ukugeleza kwakungu-4100 gpm, futhi ukungaguquguquki kwe-lime slurry epayipini kwakungu-50% solids ngesisindo. Noma i-370 ingadonsela ekujuleni kwamamitha angama-20, ukujula kokudonswa kwagcinwa ezinyaweni ze-15. IDolobha libuye lathola ukuthi umcako wawungu
kuxutshwe nomlotha wempukane, kanti i-Series 370 iqubule lokhu kwaziswa ku-50% solids ngesisindo.
Ngenxa yekhono le-dredge ukuhambisa lime ngokuqukethwe okuphezulu okuphezulu, kungenzeka ukuhambisa umcako ngefomu le-liquid bese ulibeka ngqo emasimini wepulazi azungezile. Lokhu manje sekuwumkhuba ojwayelekile maphakathi nentshonalanga, futhi inqubo iyakhula.
UMark Shea ubeke amazwana, “Sikhombisile ukuthi i-Ellicott® Series 370 dredge ingahambisa imikhiqizo yethu emithathu ngendlela engabizi kakhulu, futhi sinemakethe yale mikhiqizo. Kwakungekho neze isikhathi sokuphumula sokwehla yize sasisebenza ezinyangeni ezibandayo zasebusika. Cishe bekuyinto yethuluzi ebiza kakhulu kunazo zonke ezake zalethwa kule ndawo. ”
Ukudonswa komlotha ezindizayo, umlotha ongaphansi, kanye no-lime, obekucishe kube nzima ukululama, futhi ukukwenza konke ngengcezu eyodwa yemishini kwaba impumelelo enkulu eDolobheni laseSkyfield, e-Illinois. Akugcinanga lapho lokhu kwenziwa nge-50% izindleko zokonga kuqhathaniswa namasu ajwayelekile, kodwa futhi ezimweni eziningi lapho amasu ezivamile engasebenzi nakancane.
Qala Iphrojekthi Yakho Ye-Settling Pond Excavation Nge-Ellicott